झरनालाई हेर्न झरे दर्शक लुहाम बजार
सल्यान, चैत २४ – भर्खर निर्देशनमा डेब्यु गरेकी चर्चित अभिनेत्री झरना थापालाई हेर्न सल्यानमा भिड लागेको छ । सल्यानमा आयोजित ‘लुहाम बजार प्रथम महोत्सव, कृषि प्रदर्शनी तथा पर्यटकिय व्यापार मेला २०७३’को सातौं दिन बिहिबार अभिनेत्री झरना आउने हल्लाले दर्शक गाउँ गाउँबाट मेलामा थुप्रिएका थिए । सिम्पल पहिरनमा महोत्सवमा देखिएकी झरनाले दर्..
मिस्टर नेपालमा भिड्दै २४ युवा
काठमाडौं, चैत २४– ‘मिस्टर नेपाल २०१७’का लागि २४ युवा छानिएका छन् । देशभर आयोजना ..
पूर्व राजाको भोजमा अभिनेता राजेश हमाल
काठमाडौं, चैत २४ – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना नाति हृदयन्द्रको उपनयन (ब्र..
‘राधे’ को प्रचारमा जुटे निखिल र प्रियंका
काठमाडौं, चैत २४ – पहिलो पटक एकसाथ अभिनय गरेको चलचित्र ‘राधे’ प्रचारमा पनि अभिने..
‘आरोप’ ले तान्यो दर्शक
नवलपरासी, चैत २४ – अमर ओलीद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘आरोप’ले आफ्नो पहिलो च्यारिटी..
पूर्व प्रेमीकी श्रीमतीको ‘गृहिणी, पप्पी’ कमेन्टमाथि करिना कपुरले दिइन् यस्तो जवाफ
एजेन्सी चैत २४ – लगभग १५ दिन अघि शाहिद कपुरकी श्रीमती मिरा राजपुतले महिलावादी र मातृत्वबारे निकै विवादास्पद बयान दिएर चर्चा बटुलेकी थिइन् । मिराले गृहिणीको ताज आफूले निकै गौरवपूर्वक लगाइरहेको र आफूले कामको सट्टा छोरीलाई छनोट गरेको बताएकी थिइन् । उनले काम सिद्धाएर सन्तानलाई एक दुईघण्टामात्र समय दिनका लागि आफ्नी छोरी मिशा कोही कुक..
सुनिल ग्रोवर कार्यक्रममा फर्कनु पहिले कपिलद्वारा आफ्नो पारिश्रमिक बढाउन माग
एजेन्सी चैत २४ – कपिल शर्माका कारण उनको कार्यक्रमबाट सुनिल ग्रोवर, अलि असगर, चन्दन प्रभाकर र सुगन्धा मिश्राले कार्यक्रम छोडिसकेका छन् जसका कारण कार्यक्रमको टिआरपीमाथि निकै असर परिरहेको छ र टिआरपी चार्टमा कार्यक्रम चौथो नम्बरबाट १० औं नम्बरमा आइपुगेको छ । सोनी च्यानलले कपिललाई सबै सदस्यलाई फिर्ता बोलाएर कार्यक्रमको टिआरपी बढाउनला..
सलमान–ऐश्वर्यादेखि कट्रिनासम्मः यस्तो देखिन्छ १५ सेलिब्रिटीको हस्ताक्षर
एजेन्सी मुम्बई, चैत २४ – बलिउड सेलिब्रिटीसँग जोडिएका स–साना करा उनका प्रशंसकलाई थाहा पाउन मनपर्छ । व्यवसायिक जीवनका साथै उनीहरु के खान्छन् ? कहाँ घुम्न मन पराउँछन्, उनीहरुको जीवनशैली, फेसन, घर–परिवार, सम्पत्ति, सम्बन्ध, ब्रेकअपसँग जोडिएको विभिन्न जानकारी प्रशंसक जान्न चाहन्छन् । यी सेलिब्रिटीको हस्ताक्षर वा अटोग्राफ कस्तो हुन्छ ..
अब यस्तो देखिन थालेका छन् विनोद खन्ना, वर्ष दिनदेखि बिरामी
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, चैत २४ – कुनै बेलाका चर्चित नायक विनोद खन्ना अस्पताल भर्ना भएका छन् । पछिल्लो शुक्रबार उनलाई गिरगांव एचएन रिलायन्स फाउन्डेशन एण्ड रिसर्च सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो । विनोदलाई डिहाइड्रेसन (निर्जलीकरण) को समस्याका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको भनिएको थियो तर रिपोर्टका अनुसार उनी कुनै गम्भीर रोगले पीडित छन् । यद्यप..
हिमानीसँग देखिइन् मनिषा
काठमाडौं, चैत २३ – नेपाली मुलकी बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले पूर्व राजकुमारी हिमानी शाहसँग भेटेकी छन् । हिमानीसँग धुलीखेलको द्वारीका होटेलमा भेट गरेकी हुन् । जसको जानकारी उनले आफ्नो इष्टाग्राम मार्फत दिएकी छन् । हिमानी सहितको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै कोइरालाले धुलिखेल मौसमको तारिफ समेत गरेकी छन् । तस्बिरमा मनिषा र हिमानीको अलवा..
‘कुटुमा कुटु..’भन्दै नाचे निस्चल र स्वस्तिमा
इटहरी, चैत २३ – चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’ युनिट अहिले पुर्वमा बिभिन्न स्थानका रमणिय दृश्य क्यामरामा कैद गर्दै छ । चलचित्रमा रहने ‘कुटुमा कुटु..’ गीतको छायांकन हालै इटहरीको गोकुलम रिसोर्टमा गरिएको छ । गीतमा निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारको छवि बनाएका निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले पनि नृत्य गरेका छन् । मेलाको परिदृश्य उतार्..
श्रद्धाको लागि एक आपसमा भिडे फरहान र आदित्य
एजेन्सी मुम्बई, चैत २३ – अदित्य रोय कपुर र श्रद्धा कपुरले बलिउडमा इन्ट्री पाउन भट्ट परिवारको ठूलो योगदान रहेको छ । भट्ट परिवारले बनाएको आशिकी २ मा दुवैले डेब्यु गरेका थिए । त्यही भएर बलिउडमा भट्ट परिवारले ३० वर्ष बिताएको उपलक्ष्यमा आयोजित पार्टीमा दुवैलाई निम्तो नहुने कुरा नै भएन । तर, कुनै बेला प्रेममा रहेको […]
विनोद खन्ना अस्वस्थ, अस्पताल भर्ना
एजेन्सी मुम्बई, चैत २३ – बलिउड अभिनेता अस्पताल भर्ना भएका छन् । शरीरमा पानीको कमी देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनलाई गिरगाव स्थित एनएन रिलायन्स फाउन्डेसन एण्ड रिसर्च अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । शुक्रबार भर्ना गरिएको उनको अहिले स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको बताइएको छ । परिवारका अनुसार उनलाई चाँडै अस्पतालबाट डिस्चार्ज पन..
काठमाडौं, चैत २३ – चैत २४ गते शुक्रबारदेखि नाटक ‘आन्दोलन’सुरु हुने भएको छ । ६२/६३ को आन्दोलन जस्तै यो नाटक १९ दिनसम्म चल्नेछ । ‘आन्दोलन’ काठमाडौं मल सुनधारास्थित थिएटर मलमा मञ्चन हुन लागेको हो । २०४६ तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरुवात भएको विशेष र ऐतिहासिक दिन चैत २४ बाटै त्यस्तै झल्को दिने नाटक ‘आन्दोलन’को मञ्चन […]
तेजुको देशभक्ति गीत ‘माटोमा मैले…’
काठमाडौं, चैत २३ –गायक तेजु अर्यालको देशभक्ती गीत ‘माटोमा मैले…’ भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । युट्युव मार्फत सार्वजनिक गीतमा राष्ट्रियताको कुरा धेरै उठाइएको छ । शब्द पनि गायककै रहेको गीतमा संगीत दान बहादुर गुरुङले दिएका छन् । गीतको भिडियो समेत निर्माण गरिएको छ । थुप्रै कलाकार लिएर तयार पारिएको भिडियोलाई प्रकाश ढकालले निर..
१४ वर्षदेखि गायब यी चर्चित कलाकार जब पागलखानामा भेटिए
एजेन्सी मुम्बई, चैत २३ – ‘अर्थ’ र ‘कर्ज’ जस्ता चलचित्रमा काम गरिसकेका बलिउड अभिनेता राज किरण १४ वर्षदेखि गायब थिए । कहिले उनी अमेरिकामा ट्याक्सी चलाइरहेको त कहिले मृत्यु भइसकेको खबर आएको थियो । तर, केही वर्ष अघि ऋषि कपुरले उनी अमेरिकाकै एक पागलखानामा रहेको र त्यहाँ उपचार गरिरहेको पत्ता लगाए । तर, उनको परिवार […]
फष्टलुकमा यस्तो देखियो पंचायत
काठमाडौं, चैत २३ – ५० बर्ष पुरानो कथामा बनेको चलचित्र ‘पंचायत’को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । रामनवमीको अवसर पारेर निर्माण युनिटले चलचित्रको फस्टलुक बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । फस्टलुकमा सरोज खनाल र एक बालकलाकार देखिएका छन् ।सरोज खनाल, नीता ढुङ्गाना, रुपा राना, गिता अधिकारी, गणेश गिरी, जाहान्वी बस्नेत,बिशाल पहारी, किरण था..
प्रशिक्षमा जुटे फेसन आइकनका सुन्दरी
काठमाडौं, चैत २३ – रन वे नेपालको आयोजना रहेको प्रतिष्ठित र्सौदर्य प्रतियोगीता ‘नेपाल फेसन आइकन २०१७’का प्रतियोगीहरु अहिले प्रशिक्षणमा जुटेका छन् । राजधानीमा आयोजित बिभिन्न अडिसनबाट छानिएका २० प्रतियोगीले अन्तिम स्पर्धाका लागि प्रशिक्षणमा जुटेको रनवे नेपालकी सिइयो चाँदनी लामिछानेले जानकारी दिएकी छन् । महिला तथा पुरुषको सौन्दर्य, ..
हिसिलाको बचाउ गर्दै करिष्माले फेसबुकमा के लेखिन् यस्तो !
काठमाडौैं, चैत २२ –कलाक्षेत्रमा रहँदा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर विवादरहित थिइन् । उनको सौदर्य र सबै पुस्तासँग मिल्दो अभिनयले उनलाई सदाबहार अभिनेत्रीको रुपमा हेरिन्थ्यो । अभिनयको घट्दो क्रेजलाई उनले राजनीतिमा बिसाउने प्रयास गरिन् । जसको लागि उनले रोजिन् डा. बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको नयाँ शक्ती नेपाल पार्टी । यो पार्टी समाएदेखि कर..
स्टोरी साइकलले अमेरिकामा कला प्रर्दशन गर्ने
अमेरिका, चैत २२ – स्टारी साइकल, अमेरीकाको फोर्ट वर्थ कला केन्द्र र क्राफ्टेड इन काठमाडौंको आयोजनामा अमेरिकाको टेक्सस राज्यको फोर्ट बर्थमा ३ हप्ते नेपाल शो २०१७ आयोजना हुने भएको छ । शोमा नेपाली कलाकारहरुले तयार पारेका चित्रकला, हस्तकला र फोटोे प्रदर्शनी हुनेछन् । आगामी साता रोटरी फाउन्डेसनका प्रमुख पावल लुकासले ‘शाे’को उद्घाटन गर..
पागलखानामा छन् १४ वर्षदेखि हराइरहेका यी नायक, कतिले अमेरिकामा छन् भने कतिले मृत्यु भइसकेको
एजेन्सी मुम्बई, चेत २२ – ‘अर्थ’ र ‘कर्ज’ जस्ता फिल्ममा काम गरिसकेका नायक राज किरण १४ वर्षदेखि हराइरहेका छन् । उनीबारे कहिले उनी अमेरिकामा क्याब चलाइरहेको भन्ने खबर सार्वजनिक भयो भने कतिले उनको मृत्यु भइसकेको बताए । तर उनीबारे ऋषि कपुरले पत्ता लगाएका छन् । उनलाई विश्वास गर्ने हो भने राज किरण अमेरिकाको एक मानसिक […]
प्रियंकालाई ‘लाइदेउ न माया ले’ भन्दै पछि लागे प्रमोद
काठमाडौं, चैत २२ – अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँग रोमान्स गर्ने इच्छा जो कोहीको कहाँ पुरा हुन्छ र । गायक प्रमोद खरेलले भने आफ्नो यो रहरह पुरा गरेका छन् । प्रमोदले आफ्नै नयाँ गीत ‘लाईदेउ न मायाले’को म्युजिक भिडियोमा प्रियंकासँग रोमान्स गरेका हुन् । डिपी खनालको शब्द रहेको गीतमा राजनराज शिवाकोटीको संगीत रहेको छ । डान्सिङ बिटमा [&hell..
यस्तो छ लीलाको ‘लजालु रुप’
काठमाडौं, चैत २२ – संचारकर्मी समेत रहेका गायक कमल श्रेष्ठको नयाँ गीत ‘लजालु रुप’ म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । यु ट्युव च्यानल मार्फत यो गीत बाहिर ल्याइएको हो । आधुनिक गीत गाउदै आएका श्रेष्ठको यो गीतमा शब्द रमेश दाहालको र संगीत डेनी निरौलाको रहेको छ । भिडियोमा अहिले चलेकी मोडल लीला गिरी र […]
पुजा र पलको प्रेमकथा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ असारमा
काठमाडौं, चैत २२ – म्युजिक भिडियो मोडल पल शाह र अभिनेत्री पुजा शर्माको रोमान्स रहेको चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को सम्पुर्ण छायाँकन सकिएको छ । पोखरमा चलचित्र र गीतको सम्पुर्ण छायाँकन सकेर भर्खर काठमाडौ फर्किएको यो चलचित्रले नयाँ बर्षको असार ३० लाई चलचित्रको प्रदर्शन मिति जुर्याएको छ । चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशक सुदर्..
यस्तो आयो दयाहाङ र प्रियंकाको ह्याप्पी डेजको टीजर
काठमाडौं, चैत २१ । अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री प्रियंका कार्की अभिनित चलचित्र ह्याप्पी डेजले अफिसियल टीजर रिलिज गरेको छ । मिलन चाम्स निर्देशित चलचित्रले १५ मंसिरलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै टिजर रिलिज गरेको हो । चलचित्रमा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, संजय गुप्ता, विक्की जोशी, जोनिया लिम्बुको अभिनय रहेको चलचित्र बेलायती आइडीव..